SPC Visum, anyị nyochaa smart video intercom | Akụkọ akụrụngwa
SPC Visum, anyị na-enyocha smart video intercom a
Anyị na-aga n'ihu na nyocha nke akpaaka ụlọ na ngwaọrụ IoT Ezubere iji mee ka ndụ gị dị mfe dịka o kwere mee, nke ahụ bụ ihe masịrị anyị na Actualidad Gadget ma anyị maara na ọ bụ ihe kachasị amasị gị, ọ bụ ya mere anyị ji eweta ya. Nweta oche, n'ihi na nyocha nke taa nwere ike ime ka ị ghara ikwu okwu.
Dị ka oge niile, anyị ga-enyocha ike gị na n'ezie adịghị ike gị. Anyị na-esokwa nyocha a na vidiyo ka ị wee hụ otu esi arụ ọrụ. Anyị nyochaa SPC Visum, nwere ọgụgụ isi vidiyo nke emebere ka ị nwee ike mezue ngwa ngwa ụlọ nke ụlọ gị ruo oke, mara anyị na ya.
Reolink C2 Pro, ụzọ ọgụgụ isi iji nyochaa ụlọ gị [Nyocha]
Anyị elebanyela anya na ngwaahịa IoT n'ozuzu na ọnwa ndị na-adịbeghị anya, Ọ bụ ya mere anyị ji akwado ka ị gafere ngalaba nyocha anyị ma ọ bụrụ na ọ dị ihe ị funahụ. N'otu ụzọ ahụ m ga-agwa gị, vidiyo nke na-eduga nyocha a bụ ụzọ kachasị mma iji hụ ma ngwaahịa ahụ ọ na-atọ ụtọ dịka ọ dị ka ọ dị, ebe anyị hụrụ ya na-arụ ọrụ, yabụ anyị na-akwado ka ị gafere ya na mbụ wee mezue ya na nyocha ederede a. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na Visum SPC, ị nwere ike zụta ya na ọnụahịa kacha mma na EGO, ka anyị gaa nyocha.
3 Nhazi na ojiji ojiji
4 Ike ndekọ na echiche onye editọ
Anyị na-amalite dị ka mgbe niile na mpụga, ihe anyị na-ahụ ozugbo anyị wepụrụ Visum SPC a na ngwugwu. Anyị na-ahụ mkparịta ụka vidiyo nke dị obere ma na-eju anyị anya, mkparịta ụka ọ bụla nwere igwefoto dị ọtụtụ, ọ bụ ezie na ikekwe dị gịrịị, ee. Anyị nwere akụkụ ndị a: 6,6 x 13,5 x 3,8 cm, tinyere ọnụ ụzọ nke na-agbanye kpọmkwem na ntanetị ọ bụla, nke dị ezigbo 4,5 x 7 x 6,5 cm, o doro anya na ọ bụghị nnukwu. N'ihe banyere ibu anyị nwere gram 262 maka mkparịta ụka vidiyo na gram 53 maka mgbịrịgba ọnụ ụzọ, Ha abụghị ngwaahịa dị oke mkpa, m ga-ekwu na batrị ndị etinye na vidiyo intercom bụ ihe kachasị njọ nke ngwugwu ahụ.
E wuru ya na plastic ojii, Anyị nwere na ngwugwu ihe niile ịchọrọ, site na plọg na kposara na ibe iji wụnye intercom vidiyo na mgbidi, ọ bụ eziokwu na ọ nwere ike ịdịtụ mfe izu ohi, mana ọ bụghị karịa vidiyo intercom ọ bụla. N'ihu anyị nwere igwefoto nwere ihe ngagharị na ihe ngosi infrared nke ga-enye anyị ohere, n'etiti ihe ndị ọzọ, iji nweta ọhụụ nke abalị. N'etiti etiti enwere bọtịnụ gbara gburugburu na arc LED nke na-enwu mgbe ọ na-achọpụta mmegharị na nke na-arụ ọrụ iji gbanye mgbịrịgba ahụ.
Ọfọn, anyị na-amalite site na igwefoto, ihe kachasị mkpa. Anyị nwere ihe mmetụta nwere ike ịdekọ na mkpebi HD, ya bụ, 720p. Mkpebi ndekọ ahụ ga-abụ 1280 x 720 ma anyị nwekwara ike iji otu ihe mmetụta were foto. Nke a bụ karịa ezu na-ewere na anyị nwere ngụkọta ikiri n'akuku nke 166 degrees diagonally, mgbe kehoraizin na-anọgide ọkọlọtọ. Ajụjụ nke nchekwa ekpe ihe 8 GB microSD kaadị na-gụnyere na ngwugwu ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịgbanwe ya maka microSD ọ bụla nke anyị chọrọ mgbe niile yana nchekwa kachasị nke 32 GB na mkpokọta.
Anyị nwere ihe mmetụta nke ahụ ga - eme ka igwefoto rụọ ọrụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme ka ọkụ bọtịnụ gbaa, iguzogide ájá na mmiri, ndị ọkà okwu abụọ na ọhụụ abalị ruo mita isii. Anyị nwere ike ikwu ntakịrị ihe gbasara njirimara nka nke SPC Visum, mana ọ bara uru na-echeta na ngwugwu ahụ gụnyere akpa nke kposara, USB abụọ na eriri microUSB na ntuziaka ngwa ngwa iji, tinyere obere mkpọpu ala na plọg ndị dị mkpa. maka itinye SPC Visum ozugbo na mgbidi anyị chere na o kwesịrị ekwesị.
Nhazi na ojiji ojiji
Nhazi ahụ dị mfe, ihe mbụ anyị ga - eme bụ itinye mgbịrịgba ọnụ ụzọ ebe anyị chọrọ ka ọ daa, na nso video intercom, ngwa ngwa ọ bụ. Ozugbo anyị mere nke a, anyị ga - ebudata ngwa SPC IoT (iOS) (gam akporo) ma anyị ga - pịa bọtịnụ nrụpụta maka sekọnd isii iji hụ na ọkụ ahụ na - enyo, mgbe ahụ anyị ga - pịa "+" iji gbakwunye SPC Visum na anyị ga-ahụ otu n'ime ihe sekọnd mgbe anyị webatara igodo nke WiFi (naanị netwọk 2,4 GHz) ọ na-ejikọ na-akpaghị aka na ngwa ngwa, nke a bụ uru nke ụdị SPC nke ngwaahịa IoT.
Ozugbo ejikọrọ anyị nwere ohere ịnweta atụmatụ ya niile site na ngwa ahụ, nke a bụ uru na-atọ ụtọ. Ihe ndekọ a dị mma ọbụlagodi na ọnọdụ ọkụ na-adịghị mma, ọ bụ ezie na ịnwe ọhụụ n'abalị agaghị abụ nsogbu. Na nyocha anyị ahụbeghị nsogbu njikọ dị anya site na rawụta nke dị nso na 10 mita, mana anyị chere na ngafe dị anya nwere ike ibute nkwụsị. Anyị nwere batrị abụọ gụnyere, yabụ na anyị nwere ike ịme na-enweghị eriri, ọ bụ ezie na mụ onwe m ga-erite uru na njikọ ndị ahụ iji nye ya ohere na-adịgide adịgide yana ịgaghị ịga ụgwọ.
Ike ndekọ na echiche onye editọ
Site na ngwa ahụ anyị ga-enwe ike ikwu okwu ozugbo na ntinye ọnụ ụzọ vidiyo site na ọkà okwu abụọ, n'otu ụzọ ahụ anyị ga-enwe ike ịdekọ, nseta ihuenyo na ọbụlagodi ịnweta ndekọ echekwara na kaadị nchekwa, A ga-echekwa ihe ndekọ ndị a na loop ma hichapụ ya iji nye ohere maka ndị ọhụrụ ahụ, mana anyị nwere ike ịnweta ha ozugbo ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ibudata ha na ngwaọrụ mkpanaka anyị, nke a ga-enyere anyị aka n'okwu nchekwa. Mana ihe kachasị dị mkpa bụ na iji ọkwa ekwentị anyị ga-enwe ike ịza onye na-eme ọnụ ụzọ ọsọ ọsọ na ebe ọ bụla anyị nọ.
Mfe nke Mbido na nwụnye
Ohere nke ngwa
Ọnụahịa dị ala karịa asọmpi ahụ
Materialsfọdụ ihe dị ezigbo mma
Na gam akporo, gụgharia nwere ike ịda mgbe ụfọdụ
Anyị na-eche ihu na ngwaahịa jupụtara na njirimara ma na-efu euro 119, Ọ bụ ọnụ ụzọ ekwentị vidiyo kachasị ọnụ ala ka m nwee ike ịchọta n'ahịa, o doro anya na ọ bụghị nke kachasị sie ike izu ohi ma ọ bụ nke kachasị ewu ewu, mana ịmegharị maka ọnụahịa ahụ, ị ​​gaghị ajụ Visum SPC a maka ndị ọzọ karịa ihe ọ na-enye. Nwere ike ịzụta ya na Amazon ma ọ bụ na nke gị mkpokọta site na njikọ a. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara Visum SPC a, egbula oge ịjụ anyị na Twitter (@ngwa) ma ọ bụ na igbe igbe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » SPC Visum, anyị na-enyocha smart video intercom a
Enwere ike ijikọ ya na mkpọchi eletrik iji meghee ọnụ ụzọ?